Ndị kasị mma 10 flash mbanye data mgbake ngwaọrụ
Taa, ọtụtụ ndị na-eji a flash mbanye na-echekwa dị oké mkpa data. Flash draịva bụ otu n'ime ihe ndị kasị họọrọ nchekwa media nyere eziokwu na ha na-aba n'akpa uwe size, inogide na mfe iji. Otú ọ dị, ọ dị mfe ọnwụ data si flash ọzọ karịsịa mgbe data bụghị e kwadoo. Agba ume, na mgbe ị na ọnwụ gị data si a flash mbanye ruru formatting, mberede nhichapụ, ma ọ bụ nje virus, dị data ike ka a natara. Ị chọrọ a ọma flash mbanye mgbake ngwá ọrụ iji weghachite gị data.
1. Data Nnapụta PC 3.2
Data Nnapụta bụ ihe kasị mma data mgbake software. Nke a software na-abụghị nanị na-eji na-agbake furu efu faịlụ kamakwa naghachi nkebi tebụl, buut ndekọ na mgbagwoju wakporo nhazi. Nke a data mgbake software na-enyekwara gị aka ịmata ngwaọrụ na n'ibu defaults N'ihi ya na-a data mgbake enyemaka tupu ọzọ data na-efu.
Data Nnapụta PC3 enye onye ọrụ na a disk-Onyonyo atụmatụ N'ihi ya ị pụrụ ime ka a byte-site -byte oyiri nke gị mbụ disks ozugbo mgbe n'ibu odida etịbe.
Nke a data mgbake software na-ejedebeghị na-agbake formatted faịlụ.
Wondershare Data Recovery Bụ ike professionally chepụta software eji naghachi furu efu faịlụ site na flash mbanye. The software bụ ngwa ngwa, nchebe na naputa faịlụ niile furu efu si flash mbanye ruru ka ndị dịgasị iche. Ọ ga-eji na-agbake multiples nke faịlụ formats na ụdị faịlụ gụnyere videos, audios, Archives, email na photos.
Ị adịghị achọ ihe ọ bụla ọmụma nkà na ụzụ rụọ ọrụ a software. Otú ọ dị, ị chọrọ jirichaa kọmputa gị nkà i nwere ike iji Ọkachamara mode mgbake software.
The free ikpe mbipute nwere mmachi arụmọrụ.
Fim 4.5 Stars
3.Recuva Iweghachite Software
Recuva dị elu faịlụ mgbake software na ike weghachite gị furu efu data. Ọzọkwa, Recuva ike ga-eji na-agbake foto, ozi ịntanetị, akwụkwọ, videos. Ọ dị mfe iji na software-eme ike akụkụ maka gị. The software nwekwara a obere version otú adịghị achọ nwụnye.
Ọ dị mfe iji na nwere obere download size
Download na peeji nke bụ a bit mgbagwoju anya
Maara ihe Data Recovery bụ a ngwa ngwa freeware eji naghachi abịakọrọ faịlụ, audios, videos, akwụkwọ na photos. The software udu Doppler results na mgbe ahụ na-egosi ike nke mgbake. Ọ nwere onye dị elu search nhọrọ ikwe ka onye ọrụ chọta ehichapụ data ngwa ngwa. Maara ihe Data Naghachi nwekwara a obere version, nke enye gị ohere iji ya na kọmputa gị na-enweghị mkpa nke echichi.
akwado multiple asụsụ
The software naputa naanị ndị faịlụ ọ pụrụ ịchọpụta.
Pandora Iweghachite bụ a freeware data mgbake ngwá ọrụ na-eji na-agbake na-adịgide adịgide ehichapụ faịlụ site flash draịva. Nke a mgbake ngwá ọrụ na-Recovers ezoro ezo, archived, zoro, ma ọ bụ ugbua ka enwere faịlụ. Ọ na-ojiji ka ịhụchalụ, search, na-agagharị na-agbake faịlụ ehichapụ abụba na NTFS mpịakọta n'agbanyeghị nke faịlụ na ụdị. Ke adianade do, software nwere ike naputa audios, videos, akwụkwọ na foto si ike draịva na ebe nchekwa kaadị na egweri biini.
Recovers ehichapụ faịlụ ma ọ bụghị ma overwritten
Recovers ehichapụ faịlụ naanị
iCare Data Recovery na-eji na-agbake faịlụ na nchekwa furu efu site elezighị nhichapụ, formatting nke flash mbanye ma ọ bụ merụọ mbanye. E wezụga flash draịva, a free software ike ga-eji na-agbake faịlụ site na ike draịva na SD kaadị. Ọ bụghị adabara agbake foto ebe ọ nwere ike ịmata ha na ọ bụghị weghachite ha. The software nwere a dị mfe ọkachamara mode nke ohere ọrụ enweghị tupu nkà nke data mgbake ngwaọrụ iji na ala.
a na ngwá ọrụ akwado iche iche ụdị faịlụ na faịlụ usoro, ebe nchekwa kaadị, SD kaadị, flash draịva na mpụga ike draịva.
Ọ adịghị egosipụta ọganihu ọnụ ọgụgụ n'oge mgbake usoro. Nke ahụ bụ oge gafeworonụ ma ọ bụ hà mata faịlụ.
7. Iweghachite undelete 360
Undelete 360 ​​bụ ihe kasị mma software maka agbake furu efu faịlụ ehichapụ ma ama ma ọ bụ n'amaghị ama site flash mbanye. Files nwụkwara si egweri biini, kọmputa, SD kaadị, dijitalụ igwefoto na smart igwe nwekwara ike-natara mfe.
Ọ nwere free ikpe mbipute, nke naputa niile furu efu faịlụ-enweghị ike.
Ọ mgbe ụfọdụ renames mkpụrụedemede nke natara faịlụ na iju odide-eme njirimara siri ike.
Easeus Data Recovery-enyere gị aka iji weghachite faịlụ furu efu si flash mbanye ruru mberede nhichapụ, emerụ mbanye, na formatting ma ọ bụ usoro njehie. Ọ na-emesi nchebe na zuru ezu mgbake nke gị furu efu faịlụ site na-esonụ atọ mfe nzọụkwụ. Kpọmkwem, na-eji software naghachi furu efu audios, videos, ozi ịntanetị, foto na dọkụmentị si USB draịva, PC, laptọọpụ, igwefoto dijitalụ na ndị ọzọ na nchekwa media.
itinye usoro ihe omume bụ ngwa ngwa na nwere enyi na enyi interface
scanning nke furu efu faịlụ na-ewe a ogologo oge karịa nkịtị data mgbake software. Nke a data mgbake software na-oké ọnụ nyere ya price nke $ 80.
9 Ọrụ File Iweghachite Ngwá Ọrụ
Arụsi ọrụ ike File Iweghachite-enye ohere onye ọrụ na-agbake data furu efu si flash mbanye ruru ka ndị dịgasị iche. The software nwere doro anya nhọrọ na ngwa ngwa scanning arụmọrụ Ya mere, ndị software ga-enyere gị na-azụ gị data na oge. The software dị n'okpuru mmepe na ihe atụmatụ na a na-gụnyere iji melite arụmọrụ nke software.
Ọ nwere Superscan na-enyere aka naghachi faịlụ na Ndenye Doppler apụghị naghachi.
Ụfọdụ atụmatụ na-ezo dị otú ahụ na ọ bụ ike ịchọta. Ọ bụ ezie na mbụ scanning nhọrọ ndị doro anya, mgbake usoro adịghị n'ụzọ kwụ ọtọ otú ahụ nwere ịdị mgbagwoju anya.
Arụsi ọrụ ike undelete Software na-eji na-agbake ihichapụ data si flash disk na ndị ọzọ na nchekwa media. Nke a mgbake ngwá ọrụ ike naghachi data site na iji a pụrụ iche format specification- na signatures. The software na-akwado multiples nke faịlụ signatures na ụdị faịlụ. Nye ndị irè mgbake atụmatụ, ọ mgbake nke faịlụ dị mfe na Ọrụ undelete Data Recovery.
The software Recovers ehichapụ faịlụ na ala.
The software bụ ọnụ.
Na ekele na ọrụaka ma jụ akụkụ, Wondershare Data mgbake virus dị ka nduzi nke n'elu depụtara data mgbake ngwaọrụ. Ụfọdụ n'ime mgbake ngwá ọrụ na-ka na-mepụtara ma Wondershare Data Recovery nweela ewu ewu n'etiti electronic ọrụ. Ọ ga-ewe oge maka ndị ọzọ software ịchụkwudo na ya. Mgbe ọ bụla ị chọrọ dị ike ma dị irè software, Wondershare Dta Iweghachite bụ mma nhọrọ. Lelee ya taa.
Top 20 mgbasa ozi ọkpụkpọ kpochapụwo reviews na uzo ozo
> Resource> Top List> The kasị mma 10 Flash Drive Iweghachite Ngwaọrụ